“Firaisankina amin’i Hong Kong: mivoaka any anaty gazety lehibe erantany ny antso atao amin’ireo mpitarika G20 momba ny krizin’ny lalàna mikasika ny fampodiana olomeloka” · Global Voices teny Malagasy
“Firaisankina amin'i Hong Kong: mivoaka any anaty gazety lehibe erantany ny antso atao amin'ireo mpitarika G20 momba ny krizin'ny lalàna mikasika ny fampodiana olomeloka”
Fanangonambola avy eny ifotony nahazoana 5 tapitrisa Hong Kong tamin'ny vahoaka
Voadika ny 04 Aogositra 2019 8:39 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Italiano, Français, русский, Español, Ελληνικά, English
Fihetsiketsehana miantso an'ireo mpitarika ny G20 mba hijery an'i Hong Kong. Sary: Ng Tin Hung / Civic Human Right Front.
Jennifer Creery no nanoratra ity lahasoratra manaraka ity ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Press tamin'ny 28 Jona 2019. Ny dika avoaka etoana dia naverin'ny Global Voices araka ny fifanarahana ifampizaràna votoaty.
Ny 28 Jona 2019, nifanandrify indrindra tamin'ny andro fanokafana ny Vovonana, gazety erantany efa ho 10 mahery no nivoahan'ny antso iray ho an'ireo mpitarika ny G20 mba hihetsika manoloana ilay lalàna fanolorana olomeloka navoakan'i Hong Kong .
Na nilaza mazava aza i Pekin fa tsy hamela mihitsy ny hiresahana ny raharaha Hong Kong mandritra ny fihaonana G20 ao Osaka, niresaka ny ahiahiny tamin'ny filoha sinoa Xi Jinpng ihany momba io olana io ny praiminisitra Japoney Shinzo Abe, ny andro voalohany tamin'ny fivorian'ireo mpitarika erantany, ary nanindry ny maha-zavadehibe ny hisian'ny “Hongo Kong malalaka sy misokatra” eo ambanin'ny rafitra Firenena Tokana, Rafitra Roa.
Andianà hetsipanoherana naterak'ireo fanitsiana lalàna natolotra tamin'ny Febroary 2019 no nanozongozona an'i Hong Kong, fanovàna izay toa hanome alàlana ilay tanàna hijery arakaraky ny zavamisy ireo raharaha fangatahan'ny fitsaràna fanolorana olomeloka, tsy misy fifanarahana voapetraka mialoha — indrindra fa i Shina.
Ireny fanovàna ireny dia mety hahafahan'ny Lehiben'ny mpanatanteraka sy ireo fitsaràna ao an-toerana handray an-tànana ireo fangatahana fanolorana olomeloka tsy ilàna ny fanarahamason'ny mpanao lalàna, na dia nanao fanairana aza ireo mpanakiana momba ny ahiahiny mety hanolorana ireo mponina ao an-toerana ho any amin'ny tanibe, izay tsy misy fiarovana zon'olombelona. Ny 15 Jona, naato ny fandinihana ilay tolodalàna fa tsy notsoahana.
Ny pejy manontolo mainty sy fotsy tamin'ilay fanentanana niantsoana ireo mpamaky “Firaisankina miaraka amin'i Hong Kong ao amin'ny Fivoriana G20” nivoaka niaraka tamin'ny taratasy iray misokatra teny anatin'ireo fanontàna sangany toy ny The New York Times, The Guardian ao UK, The Japan Times, The Globe sy Mail ao Kanadà, ny Süddeutsche Zeitung ao Alemaina, ary The Chosun Ilbo ao Korea Atsimo.
Fandrafetana ny pejy doka politika. Sary avy amin'ny HKFP.
Nokianin'ilay taratasy misokatra ny politikan'i Pekin momba an'i Hong Kong:
Amin'ny fandàvany ny fanomezantokiny hoe “Firenena Tokana, Rafitra Roa”, tsy mikely soroka i Pekin manery ny hametraka fahefàna tsy refesi-mandidy ao Hong Kong. Ny vao haingana indrindra, nanolotra volavolan-dalàna ny governemanta ao Hong Kong, izay mety hanome alàlana ny olona rehetra hanolotra olomeloka ho any Shina, firenena iray malaza ratsy amin'ny tsy fanajàny ny tany tàn-dalàna. Loza mitatao ho an'ny fahafalalana fototra ananantsika izany ary manohintohina ireo orinasa mpandraharaha iraisampirenena ao Hong Kong.
Antsoin'izy io ihany koa ireo mpitarika G20 mba hiloa-bava momba ny olan'ny fahalalahana ao Hong Kong, mandritra ilay vovonana tao Hong Kong, amin'ny fanaikàna azy ireo handrisika ny governemantan'ilay tanàna hisintona ilay volavolan-dalàna mahabe resaka, hanao fanadihadiana mahaleotena momba ireo voalaza fa habibiana nataon'ny polisy tamin'ny 12 Jona 2019 ary ny hamotsorana ireo rehetra mpanao hetsipanoherana nofonjaina.
Fanentanana iray nanangonana vola teny ifotony no nandray an-tànana ny fandoavana ny lany tamin'ilay fanaovana antso avo, izay nahavoriana 5 tapitrisa dolara Hong Kon avy tamin'ny fanomezan'ny olon-drehetra. Noho ny fandraisana anjaran'ireo 20.000 malala-tànana, ora vitsy taorian'ny nanombohana azy ny 25 Jona dia tratran'ilay mpanangona ny tarigetrany 3 tapitrisa dolara Hong .
Ny 26 Jona , ho fanampin'ny hetsika fanangonambola nataony, an'aliny maro ireo mpanao hetsipanoherana ilay lalàna fanolorana olomeloka no nitety ny tanàna mba hizara ireo taratasy fanangonantsonia tany amin'ireo solotenan'ny firenena vahiny efa ho ampolony mahery, nangatahana ny mpitarika azy ireny hiteny hisolo tena an'i Hong Kong mandritra ilay Vovonana G20.
Tamin'io hariva io, an'arivony maro ny olona nifamory tao amin'ny Kianja Edinburgh ao amin'ny distrika foiben'ny fandrarahàna ao Hong Kong, ntaky ireo mpitarika erantany mba hampiasa ny feon'izy ireo ho fanohanana ny fahalalahana sy ny demaokrasia ao Hong Kong. Ireo vahoaka marobe tsy nitafy afa-tsy akanjo mainty no nameno ny kianja, niaraka tamin'ireo maro nanao hetsipanoherana nitazona sorabaventy nivaky hoe “Hong Kong Afaka” sy “Demokrasia izao ankehitsiny izao”.
Sary nalaina taminìny ‘drone’ mampiseho ny halehiben'ny hetsipanoherana ilay lalàna fanolorana olomeloka, talohan'ny Vovonana G20 tao amin'ny Distrika Foibe:
Namoaka fanambaràna iray ny Civil Human Rights Front (CHRF), izay nikarakara ilay famoriana vahoaka:
Raha toa ianareo, tahaka anay, mino ireo soatoavina toy ny demaokrasia, fahalalahana, zon'olombelona ary ny tany tàn-dalàna, miangavy anareo rehetra izahay mba hiteny mandritra ny Vovonana G20, ka hiaraka hiaro ny zonay miaraka amin'ireo vahoaka ao Hong Kong.
Nisy hetsipanoherana sy hetsika tselatra natao koa tany ivelan'i Hong Kong. Nisy andiany iray nahitàna ireo mpanao hetsipanoherana avy ao Hong Kong nandeha nandray sidina nankany Osaka ary nifamory tao an-tanàna ny 27 Jona, andro iray nialoha ny fisokafan'ny Vovonana G20.
Ny 28 Jona, olona teo amin'ny 100 teo ho eo no nanatontosa hetsika tselatra iray tao amin'ny Grand Central Terminal tao New York mba hisarihana ny saina momba ny toedraharaha politika ao Hong Kong:
Hetsika tselatra tao amin'ny “New York City central terminal”. Sary tao amin'ny pejy Facebook page: Freedom Hong Kong.
Ny Vovonana G20, natao tao Osaka, Japana ny 28 sy 29 Jona, dia nampivondrona irao mpitarika erantany avy amin'ny Fiombonambe Eoropeàna sy firenena 19 manana ny tanjaka ara-toekarena lehibe indrindra eto an-tany, izay mihaona mba hiresaka momba ireo olana ara-bola sy ara-toekarena tena maika. Na izany aza, ny 26 Jona, ny mpitondra tenin'ny ministeran'ny raharaha ivelany ao Shina, Geng Shuang, dia nampitandrina ireo hery ivelany tsy hitsabaka amin'ny raharaha anatin-dry zareo: “Na ho inona na ho inona, tsy hanaiky mihitsy i Shina ny hiresahan'ny G20 ny raharaha Hong Kong. Tena raharaha an-tokantanon'i Shina manokana io,” hoy izy.
Raha mila vaovao misimisy koka momba ireo hetspanoherana ao Hong Kong manohitra ilay lalàna nataon'i Shina momba ny fanolorana olomeloka, iangaviana hijery ny pejy fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices.